Nကိုင်ရာ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / Nကိုင်ရာ
Category Archives: Nကိုင်ရာ
VA – ရွှေရောင်နေ့ရက်များ (2013) [Album] + [SongBook]
၀၁။ မိုးခိုရုံလေး – ဟန်ထွန်း ၀၂။ ပြန်ပေးဆပ်ပါရစေ – နေနေ ၀၃။ ကြေကွဲကမ်းပါး – Rဇာနည် ၀၄။ မနိုးပါရစေနဲ့ – စိုးပြည့်သဇင် ၀၅။ ဒီကချစ်မယ့်သူ – ခင်စုစုနိုင် ၀၆။ အသက်ရှင်နေသ၍ – Lဆိုင်းဇီ ၀၇။ ရွှေရောင်နေ့ရက်များ – Nကိုင်ရာ ၀၈။ နှစ်သိမ့်ပါ – ချစ်သုဝေ ၀၉။ မင်းအတွက်ယူ – ဇော်ပိုင် ၁၀။ ကိုယ်ငိုနေတာသိပါမလား – Nကိုင်ရာ ၁၁။ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တွေး – ဗန်းသော့ဒ်ကျင်း ၁၂။ ဘယ်လိုဆက်မလဲ – နေနေ [Download Whole Album] VA -Shwe-Yong-Nait-Yat-Myar-Book.pdf Jailbroken iPod … Continue Reading →
March 26, 2013 MMA ဗန်းသောဒ့်ကျင်း အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) စိုးပြည့်သဇင် နေနေ ဇော်ပိုင် ခင်စုစုနိုင် ချစ်သုဝေ ဟန်ထွန်း Lဆိုင်းဇီ Myanmar Artist Nကိုင်ရာ New Myanmar Albums Rဇာနည်2Comments
၀၁။ ပုံပြင်ဟောင်း – ဆောင်းဦးလှိုင် ၀၂။ ချစ်ခဲ့လေသော – ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ၀၃။ နာကျင်ခြင်း = အချစ် – ဟဲလေး၊ ရှင်ဖုန်း ၀၄။ မင်းနဲ့မသက်ဆိုင်သူ – L ကိုလင်း ၀၅။ အခွင့်ပေးပါ – တင်ဇာမော် ၀၆။ နေရာချင်းလဲလိုက်မယ် – ချမ်းချမ်း ၀၇။ အိပ်မက်ချစ်သူ – JS လု ၀၈။ အိပ်မက်လေးထဲမှာ – ငယ်ငယ်၊ ထက်ထက်ဦးသာ ၀၉။ သက်တမ်းစေ့ – သီရိစံ ၁၀။ အချစ်ဦး – ကြိုးကြာ ၁၁။ ရင်ဘတ်ကိစ္စ – ဟဲလေး ၁၂။ အခွင့်အရေး – ရှင်ဖုန်း ၁၃။ … Continue Reading →
February 18, 2013 MMA ကြိုးကြာ နွဲ့ယဉ်ဝင်း အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စည်သူလွင် ရှင်ဖုန်း ဆုန်သင်းပါရ် ဆောင်းဦးလှိုင် ဥက္ကာဦးသာ တင်ဇာမော် ချမ်းချမ်း မျိုးကျော့မြိုင် ဟဲလေး Myanmar Artist Nကိုင်ရာ New International Albums New Myanmar Albums Leaveacomment
VA – Summer Holiday
Aက ၊ Reo – နွေတန်ခူးရဲ့ Holiday သြရသ ၊ စစ်သွေး – စပ်စလူးစိန်ဓါတ်ဘူးပိန် ဘရိတ်ကီ ၊ မီလျံ – ကဲသင်္ကြန် ဒီးဒီး – ပျော်ရအောင် Dယံ – လေးရက်တည်း အိမ့်ချစ် – သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း ဟဲလေး ၊ မေသျှင်ဝန်း ၊ Waiလျှံ ၊ ချိန်ချိန်း – ဗီတာမင်မလိုအင်နာဂျီမလို ဟဲလေး ၊ သဉ္စာနွယ်ဝင်း – မမေ့နိုင်တော့ပါ ထူးကျော် ၊ ခန့်ဇော် – ပက်တယ်သွက်တယ် ခင်စုစုနိုင် – မင်းနဲ့အတူ Nကိုင်ရာ – ပျော်စရာသင်္ကြန် နိုနို – အချစ်အတွက်နှစ်သစ်ကူး နွေးနွေးချစ်ဖွယ် ၊ … Continue Reading →
March 8, 2012 Myanmar Online Music အိမ့်ချစ် ဆိုတေး ဟဲလေး Dယံ Nကိုင်ရာ New Myanmar Albums Waiလျှံ သြရသ နိုနို မေသျှင်ဝန်း ယံယံ 1 Comment
1.ရှေ့ဆက်မဲ့ဘ၀ 2.ရှေ့ကိုတိုး (Feat:Jenny) 3.မောနင်းပါချစ်သူ (Feat:ဟဲလေး) 4.မခွဲစတမ်းအမြဲတမ်း 5.တစ်ခါတစ်ရံ (Feat:အိမ့်ချစ်) 6.သေချာတာက 7.မတွေးနဲ့တော့ဟေ့ (Feat:ဟိန်းမြတ်) 8.နီးခဲ့ပေမယ့် (Feat:Nကိုင်ရာ) 9.မင်းစိတ်ကြိုက် (Feat:ဟိန်းမြတ်,လွမ်းပိုင်) 10.မင်းရဲ့ညှို့ချက် Download Mediafire Link
June 22, 2011 thant zin win အိမ့်ချစ် ဟိန်းမြတ် Dယံ Jenny Nကိုင်ရာ New Myanmar Albums Waiလျှံ 1 Comment
For You (မင်းအတွက်ပါ) – MYMC Playlist
မိန်းကလေးဘက်ကနေ ချစ်သူကောင်လေးကို လက်ဆောင်ပေးတာလေးပေါ့။ pop/slow rock လေးတွေပဲ ရွေးထားတဲ့ Playlist တစ်ခုပါ။ ၁. သူသိသွားပြီ – အေးချမ်းမေ ၂. စိတ်ကူးရွက်ကြွေ – အေသင်ချိုဆွေ ၃. မင်းလေးအကြောင်း – Bambino ၄. ညှို့နိုင်လွန်းတဲ့ကျွန်မချစ်သူ – ချမ်းချမ်း ၅. တစ်ခါတည်းပဲချစ်ချင်လို့ပါ – ချမ်းချမ်း ၆. အစွန့်ပစ်ခံလရောင် – ချစ်သုဝေ ၇. ပျော်နေမယ်ပြန်တွေးတိုင်း – Cindy ၈. တိတ်တိတ်ကလေး – ကြိုးကြာ ၉. ဟိုတုန်းကလို – L ဆိုင်းဇီ ၁၀. သီးသန့်ဖြစ်တည်မှု – L ဆိုင်းဇီ ၁၁. ကြည်နူးခွင့် – မေစံပယ်ညို … Continue Reading →
January 4, 2011 amedeo ကြိုးကြာ ရှင်ဖုန်း ငယ်ငယ် ဆုန်သင်းပါရ် အေးချမ်းမေ အေသင်ချိုဆွေ ရေဗက္က၀င်း မေစပယ်ညို ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ချစ်သုဝေ ချမ်းချမ်း သီရိဆွေ Bambino Lဆိုင်းဇီ Media Nကိုင်ရာ No Leaveacomment
– အချစ်ကိုအလိုလိုသိခဲ့ပြီ(Nကိုင်ရာ) – အပြစ်မဲ့အတွေးလေး(ယံယံ) – အလွမ်းဝင်္ကဘာ(အစ္စဏီ) – အားလုံးထက်မင်း(လမင်းမိုမို) – အချစ်မှတစ်ပါး အခြားမရှိပြီ(ချိန်ချိန်း) – ညနေလေပြည်(မီးအို) – ဝေးကွာမှု(ဒီရိုင်း) – ၀ဋ္ဋ်ကြွေးတစ်ခုလို(Aက) – မုန်းဖို့လွယ်တယ် မေ့ဖို့ခက်တယ်(သြရသ) – ကြယ်ကြွေကောင်းကင်(စိုးဇော်ပိုင်) – မင်းနဲ့နီးပါရစေ( Honey Doll) – ခွင့်လွှတ်ခြင်းသို့(စွမ်းဆောင်)
October 19, 2010 Yee Wai Aung အခွေ (အများ) သြရသ Nကိုင်ရာ Leaveacomment
MMA ပရိတ်သတ်များနှစ်သက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ DownLoad Link Mediafire
September 20, 2010 Yee Wai Aung ဘိုဖြူ အခွေ (အများ) အဲလက်စ် စည်သူလွင် ဂရေဟမ် ဂျီလတ် ရတနာဦး ဆုန်သင်းပါရ် အေသင်ချိုဆွေ ဆောင်းဦးလှိုင် ဇော်ဝင်းထွဋ် ချောစုခင် တင်ဇာမော် မျိုးကြီး ဟန်ထွန်း IMP Nကိုင်ရာ7Comments
MMA ပရိတ်သတ်များလည်းကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ Mediafire နဲ့အဆင်မပြေတဲ့တေးချစ်သူတွေအတွက် Ifile.it နဲ့ပါထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ MMA ပရိတ်သတ်များအဆင်ပြေကြပါစေဗျား။
September 20, 2010 Yee Wai Aung အခွေ (အများ) ဒိုးလုံး ဖြူ ချောစုခင် ၀ိုင်ဝိုင်း မို့မို့ မျိုးကျော့မြိုင် BlueBerry Lဆိုင်းဇီ Nကိုင်ရာ NGIIK Rဇာနည် NG2K 19 Comments
အိန်ဂျယ် Volume2(Rock & Pop)
အိန်ဂျယ် Volume2(Rock & Pop) MMA မှာရှိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် သီချင်းများနှင့် တေးစီးရီးကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
June 17, 2010 the sun အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ရှင်ဖုန်း ရေဗက္က၀င်း ခင်ဘုဏ်း သအို Big Bag Lလွန်းဝါ Myanmar Artist Nကိုင်ရာ Rဇာနည် 1 Comment